အဆိုပါပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေး? | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2013 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2013 Jenn Lisak Golding
ငါတို့ရှိသမျှသိသည်အတိုင်း, ရောင်းအားနှင့်စျေးကွက်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်။ ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူး၊
RainToday.com သည်မကြာသေးမီကတင်ခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင် featuring, ဒီအလွန်ခေါင်းစဉ်အပေါ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စပွန်ဆာ, ညာဘက်တွင် Interactive မှ။ Troy Burk, CEO နှင့်တည်ထောင်သူ, အချို့ကောင်းသောအချက်များစေသည်။ သို့သော်စျေးကွက်သမားများအတွက်ကြောက်စရာကောင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုတစ်ခုရှိသည်။
Forrester သုတေသန၏အဆိုအရ B2B စျေးကွက်အားလုံး၏ထက်ဝက်နီးပါးကစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမှရရှိသောရာခိုင်နှုန်းအားလုံး၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသည်ဟုပြောကြားသည်။ ထို့အပြင်ဝင်ငွေအားလုံး၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာလျှင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။
စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲဒါဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပဲ။ ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး ။ သူတို့ကိုဖန်တီးဖို့နဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပဲ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄% ကိုသာပြောင်းလဲလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ c-level အမှုဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မပျော်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုဘတ်ဂျက်မသုံးလိုကြပါ။ ဒီစာရင်းဇယားတွေရှိနေပေမယ့်ဒါကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆိုလိုအပ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် ၀ င်ငွေ၏ ၇၅% ခန့်သည်ရောင်းအားနှင့်လွှဲပြောင်းမှုများမှရရှိသော်ငြားလည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်အများစုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အသစ်သော ဦး ဆောင်မှုကိုဖန်တီးရန်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အလားအလာရှိပါတယ်! နှင့်လိုအပ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ၏ခြုံငုံပြproblemနာသည်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာအရ၊ သူတို့ဟာခေတ်သစ်မှာမဟုတ်ရင်တောင်မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များနဲ့အရောင်းအစီအစဉ်များဟာတိုက်ဆိုင်နေပြီးပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သို့မှသာလက်ချင်းချိတ်ဆက်မှုဟာအဆင်ပြေချောမွေ့ပြီးအချိန်မီဖြစ်လိမ့်မည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဤသို့ပြုရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည် အရောင်းအ ၀ ယ်အသစ်များသည် ဦး ဆောင်သူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုစျေးကွက်တင်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စနစ်ထဲသို့ဖြည့်စွက်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်အလိုအလျောက်စနစ်သည်ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုဖန်တီးပြီးခြေရာခံသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်အလားအလာကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် ဦး ဆောင်မှုအသစ်များကိုပိတ်ပစ်ရန်အတွက်အောင်မြင်သောလမ်းပြမြေပုံဖြစ်သည့်အတွက်သေချာသည်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေး၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အရောင်းအဝယ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်စျေးဝယ်သက်တမ်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှုထောင့်မှဆင်တူသည်။ ဘာကြောင့်အတူတူအလုပ်လုပ်ရတာလဲ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရောင်း ၀ ယ်မှုတို့သည်ဘ ၀ သက်တမ်းကုန်သွယ်မှုအတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည် - တိုက်ခိုက်မှုများကိုရပ်တန့်ပြီးတစ်ခုအနေဖြင့်စတင်လုပ်ကိုင်ကြပါစို့။
မေီ Harrison အားဖြင့် 501 Copywriting ဖြတ်လမ်း
18:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 40 တွင်
ဒါကလည်း ကျွန်တော် ကြုံဖူးတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာ သေချာပါတယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် အရောင်းကြားတွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာများ ဆုံးရှုံးသွားခြင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့တွင် မတူညီသောဦးစားပေးမှုများရှိသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (ကျွန်ုပ်၏ကမ္ဘာတွင်) သည် မက်ထရစ်များနှင့် ROI (ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကို အမြဲသက်သေပြရန် လိုအပ်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်) နှင့်ပတ်သက်ပြီး အရောင်းသည် တစ်ဦးတည်းအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ဖောက်သည်တစ်ဦးစီကို တစ်ကြိမ်လျှင် ပိတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုစိုးရိမ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံး ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းမှာ အရောင်းပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အထိ လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကို ခြေရာခံရုံသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသော ဦးဆောင်သူများကို ခြေရာခံနိုင်သော်လည်း အမှန်တကယ်၀င်ငွေကို သင့်လျော်သလို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ခြေရာခံရန် အရောင်းဝန်ထမ်းများကို အားကိုးရပါမည်၊ ယင်းမှာ အမြဲတမ်းမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် (အများစုမှာ အလွန်မြင့်မားသောအခကြေးငွေဝန်ဆောင်မှုများ) ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးဆောင်လမ်းပြများသည် ရာနှင့်ချီသောထိတွေ့မှုများမှဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုတွင် ROI ကို ပုံဖော်ရာတွင် အမှန်တကယ်ခက်ခဲနိုင်သည်ဟူသောအချက်နှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။
18:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 56 တွင်
မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Tyler။ မတူညီသောဦးစားပေးမှုများအကြောင်း မင်းရဲ့မှတ်ချက်ကို သဘောတူပါတယ်။ အဲဒါ သိပ်မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် မတူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေက တူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကို နှစ်ဦးစလုံး သိရှိနားလည်ထားမယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဦးစားပေးတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ချိန်ညှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် (ဆုလာဘ်တွေကို ရိတ်သိမ်းပါ!)။
ROI သည် အရောင်း သို့မဟုတ် စျေးကွက်တစ်ခုလုံးအတွက် ROI ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ခက်ခဲသည်ဟု ကျွန်တော် အမြဲထင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် "စျေးနှုန်းတံဆိပ်" မပါဝင်နိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များရှိပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဟာ အလားအလာရှိတဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ ကော်ဖီကို ရရှိနိုင်ပြီး သူတို့ ကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီအလားအလာက အဲဒီကုမ္ပဏီနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အခြားသော အတွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပ အကြောင်းများကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲခြင်း မဖြစ်ခဲ့ပါ။ “ထိတွေ့မှုအများအပြား” ကမ္ဘာတွင် မည်သည့်အချိန်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ROI ရှိသင့်သနည်း။ အားလုံးက မရေမတွက်နိုင်ဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရခက်ပါတယ်။
18:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 36 တွင်
ကျွန်တော် သေချာပေါက် သဘောတူပါတယ်။ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတာ လွယ်ကူတဲ့ ပြဿနာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ချဉ်းကပ်ပုံမှာ အခြေခံအားဖြင့် သင့် funnel ၏ထိပ်မှ ကိန်းဂဏာန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပြုလုပ်ရန်နှင့် သင့်အတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကို ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အော်ဂဲနစ်အသွားအလာ၏ 2% သည် အချက်အလက်များအတွက် အပိုတောင်းဆိုမှုတစ်ခု တင်သွင်းကြောင်းနှင့် အဆိုပါ 2% ၏ 30% သည် နောက်ဆုံးတွင် အရောင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားကာ အဆိုပါရောင်းချမှုများသည် စုစုပေါင်း $100k ရှိသည်ဆိုပါက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင်ထုတ်လုပ်သည့် အော်ဂဲနစ်ဧည့်သည်တစ်ဦးစီ၏တန်ဖိုးကို ခန့်မှန်းပါ — အခြေခံအားဖြင့် သင့် SEO အချိန်/အားထုတ်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသော ROI ဖြစ်သည်။
ထိတွေ့မှုအချက်များစွာက ၎င်းကိုရှုပ်ထွေးစေသည်ဟု သင်မှန်သည်။ အိုး - ငါ့ကိုယုံပါ - ငါဒါကိုအားလုံးသိတယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေါ်လာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး ခန့်မှန်းခြေတိုင်းတာမှုများရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။ (ဥပမာ၊ SEO တွင် တစ်လလျှင် 10 နာရီ ပိုလုပ်သင့်သလား။ — ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြန်အမ်းငွေကို ကြည့်ကြပါစို့)။
18:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 40 တွင်
ကောင်းတဲ့အချက်တွေ၊ Tyler သင့်အတွေးများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Twitter မှာ မင်းကို အခုပဲ လိုက်ကြည့်တယ်။ နောက်ထပ်ကြားရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။